Aghụghọ iji họrọ aha ọma maka ndị edemede gị | Akwụkwọ ndị dị ugbu a
Anyị niile maara onye Harry Potter bụ ma ọ bụrụ na anyị akpọ aha ya, ... Ee, ọ bụ eziokwu, na ọtụtụ ndị maara ya naanị site na fim ya, mana ọ fọrọ nke nta ka onye ọ bụla mara na ọ na-ezo aka na agwa sitere na nnukwu saga nke akwụkwọ ndị ntorobịa mara mma onye edemede England bụ JK Rowling.
Mana gịnị kpatara ụfọdụ aha njirimara ji ede ihe n'echeta anyị karịa ndị ọzọ? Ì chere na ọ bụ naanị n'ihi ihe ịga nke ọma nke akwụkwọ ahụ ka ọ bụ ihe ọzọ? M onwe m na-eche ọ bụ n'ihi ihe niile ntakịrị: na akwụkwọ ahụ dị mma, na e bulie ya oke ma ruo onye na-agụ ya, na o bunyela ụkpụrụ na mmetụta dịka onye na-agụ ya na ọkwa ndụ ya n'oge ahụ, na ọ bụ onye ode akwụkwọ maara nke ọma, wdg. Mana odi nwute, obughi anyi nile n’emezu okwu ikpeazu a. Ọ bụghị anyị niile bụ Arturo Pérez Reverte ma ọ bụ Carlos Ruíz Zafón, naanị iji tinye ndị edemede abụọ na-aga nke ọma.
Ọ bụ n'ihi nke a ka anyị chọrọ taa inye ndị na-ede akwụkwọ, na mgbakwunye na ndị na-agụ blọọgụ anyị oge niile, usoro aghụghọ iji họrọ aha ọma maka ndị edemede ederede nke akwụkwọ ndị dị ugbu a na ndị ga-eme n'ọdịnihu.
Etu esi aha ndi edemede anyi?
Aha ị họrọ maka agwa gị ga-esonyere njirimara na ụzọ nke agwa ahụ, ya bụ, ọ ga-emerịrị nwee mmekọrịta. Ọ nwere ike bụrụ na akpọrọ agwa a mụrụ na Wales, dịka ọmụmaatụ, Antonio, mana ọ bụ nke a kacha mara? Nke a bụ ihe anyị bu n’obi site n’inye ya aha dabara adaba.
Ikwesighi ibu oke aru ịhọrọ aha… Ee, aha ndị mbụ nwere ike ịdọrọ uche ndị ọzọ, ọ bụ eziokwu, mana naanị na aha dị mfe, dịka María, Juan ma ọ bụ Alfonso apụtaghị na ọ dị mfe ichefu.
Fọdụ odide adịghịdị mkpa aha! Na ederede, anyị na-emehie oge ụfọdụ n'akụkụ ịkọwapụta nke ọma yana etu esi eme ya, mana gịnị kpatara mmadụ niile a ga-eji nwee aha ha? Mayfọdụ nwere ike mara maka ha aha otutu ma ọ bụ nanị site na ụfọdụ ọdịdị ahụ. Ọmụmaatụ: “Ndị ngwọrọ”, “Ọcha ocha”, were gabazie.
Jiri mkpirisi aha ha. Mgbe ụfọdụ, a dị mfe akwụkwọ ozi, na nke a mbụ gị aha, nwere ike na-echeta ọbụna mma na-adọta ndị ọzọ ntị karịa aha ya onwe ya. Ọmụmaatụ: M. de Magdalena, X. de Xavier, wdg.
I nwere ike ime ojiji nke akwụkwọ ọkọwa okwu nke aha, ma ndị inyom ma ndị nwoke, ma ọ bụrụ na ha na-apụta mgbe niile na ị chọrọ aha okike na aha dị iche.
Gị onwe gị, olee usoro ị na-ejikarị ahọrọ aha onye isi gị ma ọ bụ onye edemede gị na ederede?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndị dị ugbu a » Akwụkwọ » ọtụtụ » Aghụghọ iji họrọ aha ọma maka ndị edemede gị
Ezigbo ihe m kwesịrị iburu n'uche, ọ bụ ezie na m na-agakwu maka ihe ọ pụtara, mmetụta ọ na-ahapụ mgbe m na-akpọ ya yana ọbụnadị etu ha si ejikọta ụfọdụ aha ndị ọzọ:
Zaghachi Daniela de La cruz
Nkowa di nkpa nke akwukwo "Obodo na nkita" site na Mario Vargas Llosa
Notesfọdụ ederede ederede